तपाइको सानो सहयोगले खड्क बाच्ने छन् सबैले सहयोग गरौ – Radio Kushum
Aug 10, 2019 2,407
नेपाल तरुण दल पर्वत लगायतका सस्था र युवाहरुले ‘मिन परियार ’ खड्क बचाउ अभियान शुरु गरेको छ । कुश्मा नगरपालिका–४ का २९ बर्षिय मिन परियार ‘खड्का’ नेपाल तरुण दलका केन्द्रिय प्रतिनिधी हुन् । आन्द्रामा क्यान्सर भएको थाहापाए पछि उनको अहिले दिल्ली स्थित ईन्दिरा गान्धी अस्पतालमा उपचार हुँदै छ । उपचारका क्रममा सम्पती सकिएपछि उनले सामजिक सञ्जाल मार्फत आर्थिक सहयोगको अपिल गरेका थिए ।‘म बाँच्न चाहान्छु मलाई बचाउनुहोस्’ भन्दै उनले फेसबुक वालमा स्टाट्स लेखेपछि नेपाल तरुण दल पर्वतले ‘मिन परियार बचाउ’ अभियान मार्फत आर्थिक संकलनमा जुटेको हो । आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएका कारण उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले आर्थिक संकलन अभियान थालेको नेपाल तरुण दल पर्वतका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरी ‘राज’ले जानकारी दिनुभयो । मिन परियारको उपचार्थ सहयोगको लागि सम्पूर्ण तरुण युवाहरु आर्थिक संकलन अभियानमा जुटेको बताउनु भयो ।
हालसम्म १ लाख जुटेको र विभिन्न क्षेत्रवाट सहयोग जुट्ने क्रम शुरु भएको तरुण दल पर्वतले जनाएको छ । विभिन्न व्याक्तिबाट संकलन भएको रकम जम्मा गर्न मिनबहादुरकी आमा तुलसी परियारको नाममा बैक खाता सञ्चालन गरिएको छ । सबै तिर सहयोगको लागि अपिल गरियको कुश्माका स्थानिय युबा सन्तोष कार्की ले बताउनु भयो ।
वैँक मार्फत परिवारको सहभागितामा रकम संकलन गर्न थालिएको छ । व्याडमिण्टन संघबाट ५५ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ संकलन अन्य व्याक्तिबाट प्राप्त रकम पनि बैँकमै जम्मा गर्ने गरि परियारको परिवार सहयोग संकलनमा जुटेका छन् । पर्वत जिल्लामा मात्रै नभएर सहयोग संकलन अभियान बिदेशमा समेत चलिरहेको छ । बिगत केहि महिनादेखि मिनबहादुर उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ । घरको सम्पत्ती सबै उपचारमा सकिएपछि उहाँलाई अहिले आर्थिक अभाव भएको छ ।
सहयोग को लागि खाता नम्बर .2701301047496000001 heena pariyar
. Ac no. ०३०००५०१२०६२९९ Tulsi Pariyar evrest bank